သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: သီရေတာနံပါတ် ၁၄၁၅ - တတိယပိုင်း
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:34 AM
5 Jun 07, 07:58
ဂျစ်တူး: တတိယပိုင်းဖတ်ပြီး မယ်လိုဒီတွေ ရင်တွေ နှလုံးသားတွေ ဗြောင်းဆန်သွားတယ်း) တကယ်
5 Jun 07, 05:19
ပန်ဒိုရာ: အင်း.. ရင်တွေ ဘာတွေ တောင် ခုန်သွားတယ်.. မလေးရယ်. ဟတ်ဟတ်..
5 Jun 07, 02:11
MELODYMAUNG: မအိမ့် သီရေတာလေး လာဖတ်သွားတယ် အဲဒီညလေးကို လွမ်းလိုက်တာ ဟဲဟဲ ရောယောင်ပြီးတော့ လေ
ဆက်ပါ ခင်ဗျာ ။ ဖတ်လျှက်ပါ ။
တတိယအပိုင်းမှာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတဲ့ အချက်အလက်တွေက တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။ ဒီဝတ္ထုအတွက် အိမ့်ချမ်းမြေ့ အတော် အားထုတ်ရမယ့်ဟန် ရှိတယ် လို့ မြင်မိတယ်။ အဆင်ပြေသလို အေးအေးဆေးဆေးသာ ဆက်ပါ။ အပိုင်းတခုနဲ့ တခု ကြားထဲမှာ တခြားပို့စ်လေးတွေ တင်ရင်တော့ နေ့စဉ်လာဖတ်နေကြ အိမ့်ချမ်းမြေ့ ပရိသတ်အတွက် တခုခု ဖတ်စရာ ရတာပေါ့။ :)
ဒီစာကြောင်းလေးနဲ့တော့ စာဖတ်သူကို မရိုးမရွဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ဘူး.
ဘာလဲဗျာ. စတော်ဘယ်ရီရနံ့လေး ကျန်ခဲ့တာက ၀ိုင်အရက်သောက်ရင်း စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေ စားနေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ. တကယ်ဆို ရှင်းအောင်ရေးသင့်တယ်သိလား
သူမနဲ့ ကျွန်တော် အကြာကြီး အကြည့်ချင်းဆုံမိကြသည်။ သူမ မျက်လုံးလေးတွေ အရောင်တောက်နေသည်။ သူမ လက်ချောင်းလေးတွေ တုန်နေသည်။ သူမ ပါးပြင်ပေါ်မှာ ဆံနွယ်လေးတွေ ဝေ့၀ဲနေသည်။
နှစ်ယောက်လုံး အသံတွေထဲမှာ လှိုင်းတွေထနေတာကို ကိုယ်စီခံစားမိကြသည်။ ညလေပြည်က သူမ၏ဆံနွယ်လေးတွေကို တိုးဝှေ့ကစားနေကြသည်မှာ မနာလိုဖွယ်ပင် ကောင်းလိုက်ပါဘိ။
သီယာ၏ မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ဝေခွဲမရဖြစ်နေခြင်းတို့ ရောထွေးနေသည်…
မျက်ဝန်းနှစ်ခု ဆုံအတွေ့မှာ နှုတ်ခမ်းအစုံတို့ လှုပ်ရွလာကြသည်။ သီယာ၏ပါးပြင်လေး နှစ်ဖက်ကို သူ၏လက်ဖ၀ါးနှစ်ခုကြားမှာ ညှပ်ထားလိုက်ပြီး ခေါင်းလေးကို အသာအယာမော့စေလိုက်သည်။
ငှက်လေးတစ်ကောင် ဖျတ်ခနဲ လန့်ပြီး ပျံသွားသည်။ လမင်းကြီး တိမ်တိုက်များကြားသို့ ပြေးဝင်သွားသည်။ ကြယ်စုံနေသည့် ညဉ့်လယ်ယံတွင် အတောက်ပဆုံးကြယ်ပွင့်လေး၏ သက်ပြင်းမောလေးများ သူ၏လက်ချောင်းလေးများကို ထိခတ်နေသည်ကို ခံစားမိသည်မှာ ရင်ခုန်ရန်ပင် မေ့နေသည်အထိပင်…
သီယာ၏ မျက်ဝန်းလေးများကို မြတ်နိုးခြင်းအပြည့်ဖြင့် စိုက်ကြည့်နေမိရင်း မင်းမင်းရင်တွေ ထိန်းမရအောင် ခုန်လာမိသည်။
ခေါင်းကို အသာငုံ့ပြီး သီယာ၏ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးများကို …..
တော်ပြီ… ဆက်မရေးရဲတော့ဘူး… မလေးဘလော့ဂ်ကို ဆင်ဆာတွေ လာထိနေမှာ စိုးလို့.
သေချာတယ်. ဒီစာကတော့ စတော်ဘယ်ရီသီး မစားဘူး..
စတာပါ မလေးရေ… စိတ်မဆိုးနဲ့နော်…
မောင်ရန်က သူဖြစ်ချင်တာတွေမလုပ်ရဲလို့ မလေးဝတ္ထုမှာ လာထည့်နေပါတယ်ဗျို့း)
ကွန်မန့်ရေးမလို့ကြည့်လိုက်တာ .. ကိုရန်လေး ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ဘာရေးရမှန်းတောင် သိတော့ဘူး။ အဲဒီလို မရိုးမရွဖြစ်အောင် ရေးတာလည်း “မလေး အိမ့်ချမ်းမြေ့” ရဲ့ စာရေးခြင်း အတတ်ပညာတခုပဲ မဟုတ်လား ကိုရန်လေးရဲ့ .. ။
ညီမလေး အိမ့်ချမ်းမြေ့ …
အရေးအသား အတွေးအခေါ် အကြောင်းအရာ တင်ပြပုံ အားလုံး နှစ်သက်မိပါတယ်။ နောက်ထပ် ဆက်ရေးမယ့် အပိုင်းလေးတွေကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော် ရဦးတော့မပေါ့ … ။
မအိမ့်ရေ ကောင်းလွန်းလို့ ဘာကွန်မန့်မှ မရေးပဲ ငြိမ်ပြီး ဖတ်နေတာပါ.. ဇာတ်သိမ်းမှ ရေးမလို့ .. ဟဲ.. ဒီထဲက အတွေးအခေါ်တွေကော အချစ်တွေကော ဖတ်ရတာ အရသာရှိလှပါတယ်- ဇာတ်အိမ်ကလည်း တကဲ့အဖြစ်အပျက်လားလို့တောင် ထင်မိတယ်- :P .. ပင်ပင်ပန်းပန်းရေးရမယ်ဆိုတာ မြင်ပါတယ်- ဘယ်တော့ဖတ်ရမှာလဲ လို့ လာလာအော်တာက စတာပါ.. အေးဆေးရေးပါ.. အဆက်ထွက်တိုင်း အဟောင်းကိုပါ ပြန်ဖတ်ဖတ်ပြီး ခံစားပေးနေပါကြောင်း...
မလာတာကြာလို့လာသွားပါတယ်။ လာအားပေးတာပါ။ တချက်တချက်မှာ ဖျပ်ကနဲ လှမ်းကြည့်ဖြစ်သေးတယ်။ အရင်လိုပဲလားလို့ မှုံဝါးဝါးထင်ပြီး အောင်ဖေပြန်ဂျောင်းသွားတာ။ အခုတော့လည်း အားပေးစရာတွေကများနေပါ့လား။
သီရေတာကို သီတာရေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပေမယ်လည်း သီတာ့ကိုတော့ သတိရစရာဖြစ်ရတာပေါ့လေ။ ဇာတ်လမ်းက ရှည်မယ်ဆိုရင် အတွဲလိုက်တွေပဲကောင်းပါတယ်။ ဒါလည်း ဖီလင်တမျိုးပဲလေ။
ကောင်းခန်းတွေရောက်မှ ဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ရတာတွေက မြ၀တီနဲ့ မြန်မာအသံတွေ ကောင်းမှုကြောင့် ကျနော်တို့တွေလည်း ကျင့်သားရသလိုလိုဖြစ်နေပြီ။
ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေက ဥပမာရီစရာတောင် လုပ်ထားသေးတယ်။ စကားပြောရင်လေကြောရှည်တဲ့သူကို ကိုမြ၀တီ ကိုမြန်မာ့အသံလို့ ခေါ်သဗျဗျာ။ စာများဆက်ရေးးနိုင်ပါစေ